နတ်ဒေဝါ နှင့် ဝိဇ္ဇာ အပေါင်း တို့ စောင့်ရှောက်မှုကို ခံယူရရှိနိုင်သော ပုတီးစိပ်နည်း - Myanmar Express
နတ်ဒေဝါ နှင့် ဝိဇ္ဇာ အပေါင်း တို့ စောင့်ရှောက်မှုကို ခံယူရရှိနိုင်သော ပုတီးစိပ်နည်း
June 22, 2018 By Myanmar Express in တရားအဆုံးအမများ No Comments Tags: ပုတီးစိပ်နည်း
ဤပုတီးစိပ်နည်း သည် တွေ့ရခဲ သော ပုတီး စိပ်နည်းဖြစ်သည် ။ ပြု့ ကျင့် ရန်လည်း လွယ်ကူ သည်။နေ့စဉ် အာစိဏ္ဏကံ ပြု့၍ သော် ၎င်း အကြောင်း ကြီးငယ် ရှိပါက အထူး အဓိဋ္ဌာန် တင်၍သော် ၎င်း ကျင့် ကြံအားထုပ်နိုင်ပါသည်။
ယခု့ ပုတီးစိပ်တွင် ပါရှိသော ပါရမီ (၁၀) ပါးစွန့်ခြင်း (၅) ပါး စရိယ (၃) သွယ် ဉာဏ်တော် (၃) ဆူစသည့် ဂုဏ်တော် များ သည် အမြဲ သိရှိ နှလုံး သွင်းသင့်သော အရာ များ ဖြစ်ပေသည် ။စေတီ ပုထိုး များ တွင် စိပ် မည် ဆိုပါက ” မြောက် ဘက်မုဒ် ” မှ စိပ် လျှင် ဝိဇ္ဇာ များ ၏ ကူညီ စောင့် ရှောက် မှု့ကိုရရှိ မည် ဖြစ် ကြောင်း အဘိုးကလေးဝ ဆရာတော် ကြီး
မိန့် ကြား ခဲ့ ဘူး ပါ သည် ။
မည်သည့် နေ့သား မဆို မိမိမွေးနံ ဂြိုလ်သက် နှင့်အညီပုတီး ပတ်စိပ်ရပါမည် ။
ဗျည်း (၃၃) လုံး တွင် ဘုရား မပွင့် ဘူး သည့် အက္ခရာတစ် လုံး မှ မရှိပါ ။ဒါကြောင့် ဗျည်းစာ တစ် လုံး ဘုရားတစ်ဆူ ဟု့ အာရုံပြု့ရပါ မည် ။မည်သည့် ဘုရား စေတီ တွင် မဆို မြောက် ဘက်မုဒ်မြောက် အရပ် မှ မိမိ ဂြိုလ်သက် အပြည့် စိပ်ရပါမည်။
အထက်ပါ ပါရမီ ဆယ်ပါး အစရှိသော ပုတီးစိပ် နှင့်ဝိဇ္ဇာ များ နှင့် တွေ့ရမည် ဆိုသော အမှာ အတိုင်းရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီး တွင် တနှစ်တာ အချိန်ယူ ၍အဓိဋ္ဌာန် ပြု့ အားထုပ်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ရှိခဲ့သည်။၎င်း ပုဂ္ဂိုလ် ကပင် အဘိုးကလေးဝ ဆရာတော်ကြီး သို့” ဝိဇ္ဇာ များ သိဒ္ဓိပေါက် ပုဂ္ဂိုလ် များ နှင့် အခု့ အခါ တွေ့လို့ ရပါသလား ။ တကယ် ကော ရှိနေပါသလား ဘုရား”ဟု့ လျှောက် ထား ခဲ့ ဘူး သည် ။
အဘိုး ဆရာတော်ကြီး က ” ဒကာတော်ကြီး တကယ်တွေ့လို လျှင် ရွှေတိဂုံ သို့ တစ်နှစ် ဝတ်မပျက် အဓိဋ္ဌာန်ယူပါ ။ တွေ့ ရပါ လိမ့် မယ် ။ ” ဟု့ အမိန့် ရှိခဲ့ သည့်အတွက် ” မပျက် မကွက် ” သွား ရောက် အဓိဋ္ဌာန် အားထုပ် ခဲ့ ရာ တကယ် ပင် ပထမံအဘ နှင့် တွေ့ရပြီးအစောင့် အရှောက် ကို ကောင်း စွာ ခံစားရပါသည်။
နမောတဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာ-သမ္ဗုဒ္ဓဿ ။ ပုတီး (၃) လုံး
ပါရမီ (၁၀) ပါး
ဒါနပါရမီ … သီလပါရမီ …နိက္ခမပါရမီ….ပညာပါရမီ ….ဝီရိယပါရမီ…. ခန္တီပါရမီ…. သစ္စာပါရမီ… အဓိဋ္ဌာန် …..ပါရမီ… မေတ္တာပါရမီ… ဥပေက္ခာ ပါရမီ။
တစ်ပါး တစ် လုံးချ ပုတီး (၁၀) လုံး
စွန့်ခြင်း (၅) ပါး
ဓနပရိစ္စာဂ …. ပု တ္တပရိစ္စာဂ…. ဘရိယ ပရိစ္စာဂ ….အင်္ဂ ပရိစ္စာဂ….. ဇီဝိတ ပရိစ္စာဂ …
တစ်ပါး တစ် လုံး ချ ပုတီး (၅) လုံး
စရိယ (၃) ပါး
လောကတ္တစရိယ…. ညာတတ္ထစရိယ… ဗုဒ္ဓတ္တစရိယ တစ်ပါးတစ်လုံးချ ပုတီး (၃) လုံး
ပုဗ္ဗေနိဝါသာ နုဿတိ…… ဒိဗ္ဗစက္ခု … အာသဝက္ခယ …တစ်ပါး တစ်လုံးချ ပုတီး (၃) လုံး
မာရ် (၅) ပါး
ဒေဝပုတ္တမာရ်…. ကိလေသ မာရ်…. ခန္ဓ မာရ်မစ္စုမာရ် …. အဘိသင်္ခါရမာရ် …. တစ်ပါး တစ်လုံးချ ပုတီး (၅) လုံး
စိန္တိ တံ သတ္တသင်္ချေယျံ …. နဝ သင်္ချေယျ ဝါစကံ …..ကာယ ဝါစံ စတုချာတံ ….ဗုဒ္ဓတ္တံ သမုပါဂမိ (တစ်ပါး ပုတီး တစ်လုံးချ ၄ လုံး )
ဟေတုပစ္စယော …. မှ အဝိဂတ ပစ္စယော တပါး ….တစ် လုံး ချ (၂၄) လုံး
န…မော…ဗု…. ဒ္ဓါ….. ယျ….သိ….ဒ္ဓိ …. တပါး တစ်လုံး ချ (၇) လုံး
အ…အာ…ဣ….ဤ…..ဥ….ဦ…..ဧ….,သြ ….တပါး တစ် လုံး ချ (၈) လုံး
ဗျည်း (၃၃) လုံး တစ်ပါး တလုံး ချ (၃၃) လုံး
အနိစ္စ…. ဒုက္ခ…. အနတ္တ တပါး တစ်လုံးချ …(၃) လုံးပုတီး (၁၀၈) လုံး အံကိုက် ဖြစ်ပါသည်။
မိမိ မွေး နေ့ ဂြိုလ်သက် အလိုက် စိပ်ရပါမည်။
ဥပမာ…. တနင်္ဂနွေ သား သမီး ဖြစ်ပါက ပုတီး(၆) ပတ် ဖြစ်ပါသည် ။
နတျဒဝေါ နှငျ့ ဝိဇ်ဇာ အပေါငျး တို့ စောငျ့ရှောကျမှုကို ခံယူရရှိနိုငျသော ပုတီးစိပျနညျး
ဤပုတီးစိပျနညျး သညျ တှရေ့ခဲ သော ပုတီး စိပျနညျးဖွဈသညျ ။ ပွု့ ကငျြ့ ရနျလညျး လှယျကူ သညျ။နစေ့ဉျ အာစိဏ်ဏကံ ပွု့၍ သျော ၎င်းငျး အကွောငျး ကွီးငယျ ရှိပါက အထူး အဓိဋ်ဌာနျ တငျ၍သျော ၎င်းငျး ကငျြ့ ကွံအားထုပျနိုငျပါသညျ။
ယခု့ ပုတီးစိပျတှငျ ပါရှိသော ပါရမီ (၁၀) ပါးစှနျ့ခွငျး (၅) ပါး စရိယ (၃) သှယျ ဉာဏျတျော (၃) ဆူစသညျ့ ဂုဏျတျော မြား သညျ အမွဲ သိရှိ နှလုံး သှငျးသငျ့သော အရာ မြား ဖွဈပသေညျ ။စတေီ ပုထိုး မြား တှငျ စိပျ မညျ ဆိုပါက ” မွောကျ ဘကျမုဒျ ” မှ စိပျ လြှငျ ဝိဇ်ဇာ မြား ၏ ကူညီ စောငျ့ ရှောကျ မှု့ကိုရရှိ မညျ ဖွဈ ကွောငျး အဘိုးကလေးဝ ဆရာတျော ကွီး
မိနျ့ ကွား ခဲ့ ဘူး ပါ သညျ ။
မညျသညျ့ နသေ့ား မဆို မိမိမှေးနံ ဂွိုလျသကျ နှငျ့အညီပုတီး ပတျစိပျရပါမညျ ။
ဗညျြး (၃၃) လုံး တှငျ ဘုရား မပှငျ့ ဘူး သညျ့ အက်ခရာတဈ လုံး မှ မရှိပါ ။ဒါကွောငျ့ ဗညျြးစာ တဈ လုံး ဘုရားတဈဆူ ဟု့ အာရုံပွု့ရပါ မညျ ။မညျသညျ့ ဘုရား စတေီ တှငျ မဆို မွောကျ ဘကျမုဒျမွောကျ အရပျ မှ မိမိ ဂွိုလျသကျ အပွညျ့ စိပျရပါမညျ။
အထကျပါ ပါရမီ ဆယျပါး အစရှိသော ပုတီးစိပျ နှငျ့ဝိဇ်ဇာ မြား နှငျ့ တှရေ့မညျ ဆိုသော အမှာ အတိုငျးရှတေိဂုံ စတေီတျောကွီး တှငျ တနှဈတာ အခြိနျယူ ၍အဓိဋ်ဌာနျ ပွု့ အားထုပျခဲ့သော ပုဂ်ဂိုလျတဈဦး ရှိခဲ့သညျ။၎င်းငျး ပုဂ်ဂိုလျ ကပငျ အဘိုးကလေးဝ ဆရာတျောကွီး သို့” ဝိဇ်ဇာ မြား သိဒ်ဓိပေါကျ ပုဂ်ဂိုလျ မြား နှငျ့ အခု့ အခါ တှလေို့ ရပါသလား ။ တကယျ ကော ရှိနပေါသလား ဘုရား”ဟု့ လြှောကျ ထား ခဲ့ ဘူး သညျ ။
အဘိုး ဆရာတျောကွီး က ” ဒကာတျောကွီး တကယျတှလေို့ လြှငျ ရှတေိဂုံ သို့ တဈနှဈ ဝတျမပကျြ အဓိဋ်ဌာနျယူပါ ။ တှေ့ ရပါ လိမျ့ မယျ ။ ” ဟု့ အမိနျ့ ရှိခဲ့ သညျ့အတှကျ ” မပကျြ မကှကျ ” သှား ရောကျ အဓိဋ်ဌာနျ အားထုပျ ခဲ့ ရာ တကယျ ပငျ ပထမံအဘ နှငျ့ တှရေ့ပွီးအစောငျ့ အရှောကျ ကို ကောငျး စှာ ခံစားရပါသညျ။
နမောတဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ်မာ-သမ်ဗုဒ်ဓဿ ။ ပုတီး (၃) လုံး
ဒါနပါရမီ … သီလပါရမီ …နိက်ခမပါရမီ….ပညာပါရမီ ….ဝီရိယပါရမီ…. ခန်တီပါရမီ…. သစ်စာပါရမီ… အဓိဋ်ဌာနျ …..ပါရမီ… မတ်ေတာပါရမီ… ဥပက်ေခာ ပါရမီ။
တဈပါး တဈ လုံးခြ ပုတီး (၁၀) လုံး
စှနျ့ခွငျး (၅) ပါး
ဓနပရိစ်စာဂ …. ပု တ်တပရိစ်စာဂ…. ဘရိယ ပရိစ်စာဂ ….အင်ျဂ ပရိစ်စာဂ….. ဇီဝိတ ပရိစ်စာဂ …
တဈပါး တဈ လုံး ခြ ပုတီး (၅) လုံး
လောကတ်တစရိယ…. ညာတတ်ထစရိယ… ဗုဒ်ဓတ်တစရိယ တဈပါးတဈလုံးခြ ပုတီး (၃) လုံး
ပုဗ်ဗနေိဝါသာ နုဿတိ…… ဒိဗ်ဗစက်ခု … အာသဝက်ခယ …တဈပါး တဈလုံးခြ ပုတီး (၃) လုံး
မာရျ (၅) ပါး
ဒဝေပုတ်တမာရျ…. ကိလသေ မာရျ…. ခန်ဓ မာရျမစ်စုမာရျ …. အဘိသင်ျခါရမာရျ …. တဈပါး တဈလုံးခြ ပုတီး (၅) လုံး
စိန်တိ တံ သတ်တသင်ျခယြေံ …. နဝ သင်ျခယြေ ဝါစကံ …..ကာယ ဝါစံ စတုခြာတံ ….ဗုဒ်ဓတ်တံ သမုပါဂမိ (တဈပါး ပုတီး တဈလုံးခြ ၄ လုံး )
ဟတေုပစ်စယော …. မှ အဝိဂတ ပစ်စယော တပါး ….တဈ လုံး ခြ (၂၄) လုံး
န…မော…ဗု…. ဒ်ဓါ….. ယြ….သိ….ဒ်ဓိ …. တပါး တဈလုံး ခြ (၇) လုံး
အ…အာ…ဣ….ဤ…..ဥ….ဦ…..ဧ….,သွ ….တပါး တဈ လုံး ခြ (၈) လုံး
ဗညျြး (၃၃) လုံး တဈပါး တလုံး ခြ (၃၃) လုံး
အနိစ်စ…. ဒုက်ခ…. အနတ်တ တပါး တဈလုံးခြ …(၃) လုံးပုတီး (၁၀၈) လုံး အံကိုကျ ဖွဈပါသညျ။
မိမိ မှေး နေ့ ဂွိုလျသကျ အလိုကျ စိပျရပါမညျ။
ဥပမာ…. တနင်ျဂနှေ သား သမီး ဖွဈပါက ပုတီး(၆) ပတျ ဖွဈပါသညျ ။
Credit :original uploader
« ဖခင်ပြောပြခဲ့တဲ့စကားကို လက်တွေ့ကြုံမှ နားလည်သွားတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် » ဦးလေး ပြောလိုက်တော့မှပဲ နာမည်ကြီးဖုန်းတွေ ရစရာကိုမရှိတော့ဘူး